Yemfihlo - Besca Industrial Co., Ltd.
Besca Cable Itreyi
SABC3 ileli Itreyi
BC4 ileli Itreyi
Wocingo Cable Itreyi
U neZilinganisi and Base
NeZilinganisi Plate Flat
Oil & Gas nomfula
Ukusebenza SABC3 / BC4 Cable Itreyi
Aluminium bahambahamba, Cable nezithetyana zaso neleli
BC1 / 2/5/6 Cable Itreyi
SABC3 Cable Itreyi (H = 50)
BC4 Cable Itreyi (H = 50)
BL1 / 2/3 Steel Cable ileli
NEMA 12B / 16A / 20b / 20c Steel Cable ileli
Marine Cable ileli
NEMA 20c / BL4 Cable ileli Aluminium
Cover Cable ileli
BL5 / 6 zu Cable ileli
BM1 / 2/3 wocingo Cable Itreyi
BM4 / 5/6 wocingo Cable Itreyi
BW1 zomzila (63.5X63.5)
BW2 zomzila (102X102)
BW3 zomzila (152X152)
BT1 / 2/3/4/5/6 Cable yeentambo
BT7 zu Cable yeentambo
BT8 Aluminium Cable yeentambo
Eziphathekayo Faka Channel
Boiler & Pressure umkhumbi Steel
Ingxubevange Low Amandla High Steel
Carbon Fine Isakhiwo Steel
Amandla High & esezingeni Steel
ULWAZI ekuqokeleleni kunye nosebenziso
Shanghai Besca Industrial Co., Ltd hlonipha ukhuseleko kwakho kwaye ufumana nzulu ukhuseleko kwakho intanethi. Ukuze ikunike iimveliso ezigqwesileyo, iinkonzo kakuhle umxhasi, kunye nohlaziyo fast, sirekhoda iintlobo ulwazi ukusuka kutyelelo yakho kwisayithi yethu. Ukuze ngcono ikwenzele, singathanda ukucacisa izenzo zethu ulwazi online nendlela inkcazelo yakho iyaqokelelwa ize isetyenziswe.
Shanghai Besca Industrial Co., Ltd yemfihlo
Siyabulela kunikezelo website (Idilesi yendawo: https://www.bescatray.com/ ). Thina wedwa kwaye ufuna ukukhusela inkcazelo yakho yobuqu. Ukuze ufunde okungakumbi, nceda ufunde Isaziso yethu yabucala
Esi Saziso Privacy ucacisa indlela ukuqokelela, sebenzisa, kunye (phantsi kweemeko ezithile) ukuveza iinkcukacha zakho. Esi Saziso bodwa lichaza amanyathelo athatyathiweyo ukuba ukukhusela inkcazelo yakho yobuqu. Okokugqibela, le Saziso Privacy ucacisa iinketho zakho malunga nokuqokelela, ukusetyenziswa, kunye nokuveza iinkcukacha zakho zobuqu. Ngokutyelela Site wethu, ukwamkela izenzo ezichazwe kwesi Saziso.
Esi Saziso Yokuphepha isebenza kuphela kule Site. Lo mgaqo-nkqubo wabucala akuthethi ukuba isicelo yethu ukuqokelelwa offline kwiinkcukacha zakho. Nceda ujonge apha ngezantsi ukuze ufumane iinkcukacha. Asinaxanduva ukuba umxholo okanye zabucala izenzo na engekho https://www.bescatray.com/ website apho eli Site unxulumanisa okanye ukuba iilinki kwisayithi yethu.
1. Ulwazi Collection. Siqokelela iinkcukacha kuwe ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo kule Site. Enye injongo ekuqokeleleni inkcazelo yobuqu kuwe kukunikezela amava kakuhle, enentsingiselo, yaye zifanele. Ngokomzekelo, sinokusebenzisa inkcazelo yakho yobuqu ku:
Nceda wenze oku Site lula ukuba usebenzise Ngenxa yokungabi ukungena ulwazi kwakhona.
Akuncede ufumane ulwazi, iimveliso kunye neenkonzo.
Sincede ukudala Umxholo okweli Site oko kakhulu efanelekileyo nawe.
Uqaphele ukuba ulwazi olutsha, iimveliso, kunye neenkonzo esinikeza ngazo.
Ngokuqhelekileyo, akukho mfuneko ukunika iinkcukacha zakho zobuqu ukuba utyelele le website. Nakuba kunjalo, ukwenzela ukuphucula umgangatho wenkonzo, inkampani ingafuna ukuba usinike iinkcukacha zakho ukwenzela ukuba iNkampani ukuqonda ngcono iimfuno zakho ukuze ndilungiselele nina, kwangaxeshanye, iNkampani kufanelekile ukuba athabathe amanyathelo ukuqinisekisa ulwazi othe ukunikeza bombhalo. Ukuba unikeze ulwazi lobuqu malunga ngabanye, ngoko wenza ukuvunywa ngokusesikweni abanye. Izithembiso nkampani, ngaphandle kokuba ukuba iminqweno yakho, inkampani akayi ukwabelana ngeenkcukacha zakho zobuqu iNkampani kunye namalunga zalo naliphi na iqela lesithathu.
2. Sebenzisa Information and Disclosure.
(a) Sebenzisa lwangaphakathi. Sisebenzisa iinkcukacha zakho zobuqu oda yakho kwaye zikunika kwimithetho yoncedo lwabathengi. Siya ngaphakathi sisebenzise iinkcukacha zakho zobuqu ukuphucula isiqulatho Site yethu kunye noyilo, ukuphucula eluntwini lwethu kunye nemizamo yethu zorhwebo (kuquka ukuzithengisa iinkonzo zethu kunye neemveliso kuni), kwaye wokuchaza ulwazi yentengiso jikelele malunga iindwendwe kule Site.
(b) Communications nawe: Siza kusebenzisa iinkcukacha zakho ukuqhakamshelana nawe malunga kwisayithi yethu, nemiyalelo yakho zihanjiswe. Kwakhona, singathumela imeyili uqwalaselo xa ubhalisa nathi.
(c) Sebenzisa lwangaphandle. Sifuna ukunika inkonzo egqwesileyo kunye nokunyusa nawe Ukukhetha olukhulu - thina ngokuyintloko ukuthengisa impahla, ulwazi. Asazi ukuthengisa, irente, urhwebo, ilayisenisi, okanye ngenye ukuveza iinkcukacha zakho ezithile okanye inkcazelo yemali nakubani na.
Le Site kumanya iinkqubo ngokwasemzimbeni, electronic, kunye nezolawulo ukuze sikhusele imfihlo iinkcukacha zakho, kuquka Secure Layer ( "SSL") kuzo zonke iintengiselwano zemali ngale Site. Siye ukusebenzisa ufihlo lwe SSL ukukhusela iinkcukacha zakho kwi-intanethi, yaye sithatha amanyathelo aliqela ukukhusela inkcazelo yakho yobuqu kwizibonelelo zethu. Ukufikelela kulwazi zakho kumiselwe. abasebenzi Kuphela abafuna ukufikelela kwiinkcukacha zakho ukuze enze umsebenzi othile banikwa ukufikelela inkcazelo yakho yobuqu. Ekugqibeleni, sithembele abaniki-nkonzo wesithathu-zamaqela ukhuseleko ngokwasemzimbeni kwabanye kwimpahla yentsimbi ye computer yethu. Sikholelwa ukuba iinkqubo zabo ukhuseleko zanele. Ngokomzekelo, xa undwendwela Site wethu, wena ufikelele iiseva ukuba zigcinwe kwindawo ekhuselekileyo emzimbeni, emva ehokweni etshixiweyo kunye firewall elektroniki.
Xa sisebenzisa izilumkiso shishini-standard ukukhusela inkcazelo yakho yobuqu, asinakukwazi ukuqinisekisa ukhuseleko ngokupheleleyo. 100% ukhuseleko olupheleleyo akumenzi okwangoku ayikho naphi intanethi okanye ngaphandle kweintanethi.
UMNXEBA: 8621-58366258 IFAKSI: 8621-58352578